तनहुँको व्यास नगरपालिकाको मेयर/उपमेयरका कुन उम्मेदवारले कति पाए मत ?(सबैको मतसहित) -
९ जेष्ठ २०७९, सोमबार ११:२४
किरण श्रेष्ठ ९ जेष्ठ २०७९, सोमबार ११:२४ 1 min read
तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भएको छ । व्यासको मेयरमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार वैकुण्ठ न्यौपाने विजयी भएका छन् ।​ उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीलाई हराएर विजयी भएका हुन् ।
न्यौपानेले १२ हजार ७८ मत ल्याएर मेयरमा विजयी हुँदा उनका प्रतिष्पर्धी जोशीले ११ हजार ८२६ मत पाए । व्यासको मेयरमा न्यौपाने र जोशी बीच कडा टक्कर परेको थियो । अन्ततः न्यौपानेले २५२ को मतान्तरले नगरप्रमुखमा विजयी भए ।
यता उपमेयरमा कांग्रेसकी इन्दिरा दरै विजयी भएकी छिन । उनले आफ्नो प्रतिष्पर्धि नेकपा एमालेकी बसुन्धरा घर्तीलाई पराजित गरेकी हुन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार दरैले १३ हजार ४९८ मत ल्याएर विजयी हुँदा घर्तीले १० हजार ४२ मत मात्रै पाईन । दरै ३ हजार ४५६ मतान्तरले विजयी भएकी हुन् ।
अन्य प्रमुखका उम्मेदवारले कति ल्याए मत ?
व्यास नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अतिन्द्र केशरी न्यौपानेले ६५९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दौलत अधिकारी(राजु)ले ५४६, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी मिना थापाले १६५, विवेकशील साझा पार्टीका रमेश प्रसाद आचार्यले १३९, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनकी अनिता थापा मगरले ५३, मौलिक जरोकिलो पार्टीका रमेश पौडेलले ४२, स्वतन्त्र उम्मेदवार पार्वती कार्कीले ४१, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)की अन्जना थापाले २९ र स्वतन्त्र उम्मेदवार धन वहादुर परियारले १७ मत पाए ।
उपप्रमुखमा कस्ले कति मत पाए ?
यस्तै व्यास नगरपालिकाको उपप्रमुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी चन्द्रावती पन्थले ७९१, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)की मनु माया श्रेष्ठले ७०६, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की देवा सुर्खालीले ६८२, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वहादुर सिंह थापाले ११६, विवेकशील साझा पार्टीकी हसिना बानुले ८४ र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनकी श्री माया थापाले ५४ मत पाईन ।
व्यास नगरपालिकामा कुल ४७ हजार ५४२ मतदाता रहेकोमा ३० हजार २४७ मत खसेको थियो ।
१४ वटा वडा रहेको व्यास नगरपालिकामा काङ्ग्रेसले ११ वटा वडा जितेको छ । व्यास नगरपालिकाको वडा नं-१, २, ३, ६, ८ र ९, १०, ११, १२, १३ र १४ मा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ ।
यता व्यास-४, ५ र ७ को वडाध्यक्ष नेकपा एमालेले जितेको छ ।
व्यास नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी: मेयरमा दोहोरिए न्यौपाने, उपमेयरमा दरै